Akhriso:-Guddiga Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed oo War cusub soo saaray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddiga kumeel gaarka ah ee uu Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Xukuumadda Soomaaliya Khaliif Cabdi Cumar uu magacaabay sii waddi doona howlihii rugta Ganacisga iyo Warshadaha ayaa sirasmi ah u shaaciyay inay shaqadooda bilaabeen.
Kadib shir ay yeesheen qoraal ay kasoo saareen ayaa waxaa ay ku sheegeen in ay ka wada hadleen sidii loo dardar gelin lahaa Shaqada loo igmaday iyo waajibaadka saaran.
Sidoo kale qoraalkooda waxaa ay ku sheegeen inay ka hadleen sidii loo soo dhisi lahaa nidaam iyo maamul hufan oo ay yeelato Rugta ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed, iyada oo laga wada qeyb-gelinayo taladeeda dhamaan Ganacsatada Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan.
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa Guddigaas u magacaabay sii waddida howlihii rugta Ganacsiga Soomaaliyeed, kadib markii uu kala diray xubnhihii Rugta Ganacsiga oo kasoo horjeeystay Go’aankaas.
Maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa ka horyimid tallaabadii lagu kala diray Guddigii Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed, iyagoona sheegay in aysan qeyb ka aheyn Guddigaas KMG ah ee la magacaabay.